Ungakwenza Kanjani: Vimbela Izaziso ze-Xfce Ekubonisweni Kwamanye Ama-Desktops | Kusuka kuLinux
Angicabangi ukuthi yimina ngedwa onedeskithophu engaphezu kweyodwa. Futhi akuyona yodwa ehlela wonke amadeskithophu ayo ngokuhlukile. KodwaNgabe akwenzeki kuwe ukuthi kwesinye isikhathi izingxenye ezisuka kokwethulwa kwideskithophu eyodwa kokunye ngaphandle kwemvume? Lokho kunjalo nge Izaziso ze-Xfce, futhi ngizokukhombisa ukuthi ungakugwema kanjani 🙂
I-Las Izaziso ze-Xfce woza ngephakeji xfce4-yazisad, futhi uhlale uzibuza ukuthi izaziso ezijabulisayo zivela kanjani yonke indawo. Okuningi uma bengenalo ifayela .desktop ake abaqhube. Impendulo ilula: I-D-Bus. Kungenzeka ukuthi abanye bake bezwa ngayo, njengoba inesibopho sokuxhuma ukuxhumana okuningi ezingeni lesoftware. Ngaphandle kokuya kude kakhulu, I-D-Bus yethula ngokuzenzakalela uhlelo lwesaziso se-Xfce ekuqaleni wonke umuntu ama-desktops, ukuwavumela ukuthi ahlanganyele nawo ngokushesha.
Esizokwenza ukuhlela insizakalo etshela i-D-Bus ukuthi ihlale isebenza lezo zaziso. Masenze lokhu:
Sizokopisha lokhu script, futhi sizowusindisa ngesihleli sethu sombhalo esithandayo. Gcina noma ngabe ufuna kanjani, kepha khumbula igama. Ngiyilondoloze njenge anizbeknot.sh.
Sinikela izimvume zokubulawa kusikripthi, kungaba nge-explorer yefayela noma ngomyalo: chmod +x nombre-script.sh
Sikopishela umbhalo ku / usr / umgqomo /, ukuze kwenziwe kube lula futhi kuphephe. Singasebenzisa umyalo: sudo cp nombre-script.sh /usr/bin/
Sizohlela isevisi I-D-Bus ngesihleli sombhalo. Ifayela litholakala ku: /usr/share/dbus-1/services/org.xfce.xfce4-notifyd.Notifications.service
Sizoshintsha umugqa othi: I-Exec = / usr / lib / xfce4 / notifyd / xfce4-notifyd ukufanisa indlela yeskripthi sethu. Kungabukeka kanjena:
Songa bese siqala kabusha ukuze silwazise kangcono ushintsho. Zama ama-desktops ahlukene ngezinhlelo ezahlukahlukene zezaziso, ukuze uqiniseke ukuthi iyasebenza.
Enye incazelo mayelana neskripthi: okwenzayo ukubheka ukuthi inqubo iyasebenza yini amasizini-4, esebenza kuphela eduze kwedeskithophu Xfce. Ngaleyo ndlela umbhalo uqinisekisa ukuthi uyasetshenziswa Xfce, futhi umkhonto izaziso. Lapho nje sishintsha ideskithophu, iskripthi sithola ushintsho sibonga ku I-D-Bus y ayikhiphi xfce4-yazisad. Impilo yinhle ngemibhalo.
Ngiyethemba uyithandile, khumbula ukuthi ungashiya iziphakamiso nokungabaza kumazwana 🙂 Sanibonani.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungakwenza Kanjani: Vimbela Izaziso ze-Xfce Ekubonisweni Kwamanye Ama-Desktops
URodrigo Bravo kusho
Siyabonga ngolwazi. Bengifuna ukwazi ukuthi ngikwenza kanjani lokhu isikhathi eside. Ngoba lapho ngifuna ukusebenzisa i3wm, izaziso ze-xfce zimboze sonke isikrini sami. 🙂
Phendula uRodrigo Bravo
Kuhle! Kwesinye isikhathi ngiphuthelwa iXfce kancane, kepha i-KDE isingithinte !! Futhi manje nge-Arch, angizazi nokuzazi 😀
Ngihamba ngendlela efanayo kodwa nge-MATE esikhundleni se-KDE 😀
Ngisemathafeni e-LXDE futhi ngiyayithanda, yize ngiphuthelwa iningi labasizi be-KDE kodwa kancane kancane ngiyayijwayela
Yebo, ukuba naleyo ndawo angicabangi ukuthi uphuthelwa yizici ze-KDE !! ..
notify-send "Great Tuto" "Impela ngaphezu kweyodwa kuzoba wusizo kakhulu. \_ nNgisebenzisa izaziso ze-Xfce ezishunwe kancane kudeskithophu yami futhi zikanokusho. \_ nUmnikelo omuhle kakhulu."
Ungathanda ukwenza okuthunyelwe mayelana nokuthi uzenza kanjani izaziso zakho ku-OpenBox? .. ..Bengifuna into efanayo isikhathi eside, futhi angiziniki isikhathi sokuyifunda .. ..noma bengicabanga ukusebenzisa i-dzen2 ..
Kusukela vele ngiyabonga kakhulu ..
Ngisebenzisa i-NotifyOSD Customizable ku-Openbox. Ingivumela ukuthi ngiguqule umbala, usayizi nokunye okuningi. Ngingenza okuthunyelwe, yebo, kepha lokho bekungeke yini kube buthakathaka kakhulu? Ukube benginokunye ...
Kuhle, nginguthisha futhi kwesinye isikhathi kumbukiso wama-slide, isaziso esivela ngezikhathi ezithile singangena "ekilasini".
Umbuzo owodwa, akucasuli yini ukuthi izithonjana ze-NITRUX azinazo izinhlobo ezikhanyayo zamapaneli amnyama?
Yebo, kuyangicasula ... Kuyacasula nokuthi isithonjana sevolumu silula kuphela, nokuthi izinkinobho ze-Pause / Play / Advance / Play zimnyama (ngingazithanda zibomvu-olintshi). Uma ngisebenzisa iParole kusikrini esigcwele kuyacasula kakhulu, futhi bayizinkinobho ezincane. Ingqikithi yonke ilungile, kepha ayitholakali: /
Umnikelo muhle, into eyodwa, unganginika imininingwane yaleso skrini? Iphaneli, itimu ye-GTK, ingqikithi yesithonjana, njll. Ngiyacela futhi ngiyabonga. 🙂
Iphaneli ephezulu yiphaneli yakudala yeXfce, iphaneli engezansi iPlank (kusuka ku-elementaryOS), enengqikithi engiyitholile ku-deviantArt. Kuseshwa "ipulangwe theme" kufanele kuvele.
Ingqikithi yesithonjana yiNitrux, kanti i-GTK / Xfwm yiNumix. Inathi esephaneli ivula i-WhiskerMenu M
Futhi iphepha lodonga livela eqoqweni elibizwa nge- "Gaia" engilitholile ku-deviantArt. Zinhle kakhulu. Ungayithola ngokuseshela i- "Gaia Gibbon," bese usuka lapho uhlole iqoqo lomdali.
Ngiyabonga compa. Ozithobayo.
Kuhle kakhulu! Bengicabanga ngalokhu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Sawubona, usenza kanjani isithonjana sohlelo lokusebenza sivele emaphethelweni ewindi? Shintsha i-show_app_icon = inani langempela kufayela le-themerc kepha alibonakali kimi 🙁
Angazi lutho ngalokho, kuyingxenye yesihloko futhi bengingazi nokuthi kungashintshwa noma okuthile: /
UJuan Sosa kusho
Ngiyabonga kakhulu ngemininingwane engibe nayo yokusula uhlelo lwezaziso lwe-xfce ku-Ubuntu ukugcina i-Ubuntu yoqobo futhi kungikhokhele ukusebenza. Ozithobayo.
Phendula uJuan Sosa
I-ATI, 'iRadeon' nentengo yokuphila ngenkululeko ...